Weftiyo Garoowe u imanaya wejigii labaad ee Mabaadii’da Garoowe - Sabahionline.com
Weftiyo Garoowe u imanaya wejigii labaad ee Mabaadii’da Garoowe Febraayo 15, 2012
Ammaanka ayaa la adkeeyey iyadoo ay saraakiil maxalli ah iyo kuwo heer qaran ahiba billaabeen in ay ka soo degaan garoonka caalamiga ah ee Garoowe iyagoo u imanaya wejigii labaad ee shirweynaha manaadii’da Garoowe oo loo qorsheeyey in uu billowdo Arbacada (15-ka February) Idaacada Shabeelle ee Soomaali ayaa sidaa werisay. Qodobbo la xiriira
Hoggaamiyeyaasha Soomaalida oo isugu yimid shir ku saabsan qorshe hawleedka (Roadmap)
Shirka Garowe II oo lagu sameeyay qaab-dawladeed cusub
Hoggaamiyayaasha Soomaalida oo ku heshiiyay wakhtiga uu dhammaanayo xilliga kala guurku
Raysal wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Maxamed Cali iyo weftigiisa ayaa waxaa soo dhaweeyey Madaxweynaha Puntland, Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, Madaxweyne ku Xigeenka Cabdisamad Cali Shire, dhawr wasiir iyo xubno baalamaanka ah, iyo dad badan oo sheedda ka fiirsanayey, sida ay qortay jariidadda Garowe Online. Madax kale oo ka socota DFKMG ah, Midowga Afrika, iyo hay’adaha samafalka ee caalamiga ah ayaa laga rajeynayaa in ay shirweynaha soo xaadiraan. Shirka ayaa wuxuu is-waafajin doonaa dastuurka federaalka ah iyo kan Puntland, waxyaabaha khuseeya tubta khariidadda (roadmap) ee looga gudbi lahaa ku-meel-gaarnimada haatan ay ku jirto dawladda Soomaaliya. Shirku wuxuu socon doonaa saddex bari illaa 180 ergayna waa la filayaa in ay soo xaadiraan, sida ay qortay Garowe Online. Shirkii koowaad ee mabaadii’da Garoowe ayaa la soo gebagabeeyey 24-kii December, 2011. Muxuu kula yahay qoraalkan?